ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပို ရဲစခန်းတွင် စစ်ချက်ပေးပြီး အာမခံယူ - Yangon Media Group
ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပို ရဲစခန်းတွင် စစ်ချက်ပေးပြီး အာမခံယူ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ
ဗေဒင်ဟောခန်းအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်သည်ဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုသည် စမ်း ချောင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် စစ်ချက်ပေးခဲ့ပြီး အာမခံယူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်း၌ အောင်ချစ်ပိုက နှုတ်ဖြင့်စစ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဒိန်းပိုပိုဒေါင်တိုင်ထားတဲ့ကိစ္စ တွေကို ပြန်မေးတာပါ။ အဲဒါကို စစ်ချက်ယူတာပါ။ အဓိကတော့ သူတို့တိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တော့ စစ်ချက်ပေးတာပါ။ နောက်ပြီး ဒီနေ့ အာမခံလည်းယူခဲ့တယ်”ဟု စစ်ချက်ယူပြီး ရဲစခန်းအထွက်တွင် ဗေဒင် ဆရာ အောင်ချစ်ပိုက မီဒီယာများကို ပြောသည်။ အမှုဖွင့်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ နေနှင့်တိုင်ပင်ကာ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ အောင်ချစ်ပိုကို ဖွင့်ထားသည့်အမှုများမှာ အာမခံပေး၍ရသောကြောင့် အာမခံပေးလိုက်ပြီး အာမခံဖြင့် ၎င်းကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဟု စမ်း ချောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ကျောက် ရေတွင်းရပ်ကွက်နေ မဒိန်းပိုပိုဒေါင် (၂၂)နှစ်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန်အတွက် စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားရှိ ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပို (၃၅)နှစ်၏ ဗေဒင်ဟောခန်းသို့ သူငယ်ချင်းနှင့်အတူ သွားရောက် ဗေဒင်မေးခဲ့ကြောင်း၊ ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုက ပါလာသည့်သူငယ်ချင်းအား အပြင်သို့ထွက်ခိုင်းပြီး စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန်နှင့် အချစ်ရေးအောင် မြင်ရန်အတွက် ဗေဒင်ဆရာကိုယ်တိုင် အဆောင်ထည့်ပေးမှ စွမ်းမည်ဟုပြော ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ၎င်း၏ရင်သား ကြားသို့ လူနှစ်ယောက်ဖက်နေသည့် ရွှေရုပ်အဆောင် ယတြာအားထည့်ကာ ကိုင်တွယ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အပြင် ရင်သား နေရာကို ဆီမန်းလိမ်းရမည်၊ မလိမ်းပါ က စာမေးပွဲကျမည်ဟု အယုံသွင်း ခြိမ်း ခြောက်၍ ရင်သားနှင့်မိန်းမကိုယ်အား လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ် ဆီမန်းလိမ်းပေးခဲ့သည်ဟုဆိုကာ စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်းသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်း က တိုင်တန်းအမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စမ်းချောင်း မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၅၄/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၅၄/၅ဝ၆ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းနှင့် ထိုင်းဘတ်ငွေများ ခိုးယူလာသည့် လူငယ်နှစ်ဦးကို တာချီလိတ်၌ ဖမ်းဆီးရမိ
ဗန်ဒစ် အပေါ် ခါးသီးသော ကြိုဆိုမှုများ ရှိနိုင်သည်ကို ကလော့ပ် မျှော်လင့်ထား
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများကို ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးရာတွင် တိကျမျှတစွာ ??
ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်ကို မိဘနှစ်ပါးမှ ကျပ်သိန်း ၅ဝ ဖြင့
ထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့နဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး ဂိုယောင်းဂျောင်းကို ‘Return’ ရိုက်ကူးရေးမှ ထုတ်ပ
ဆန်ဂူရီကို အဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိများက စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့
ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကို ပစ်သတ်ခဲ့သူက ၎င်း၏လက်ဖဝါးတွင် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ စကားများကို ရေ?
လှိုင်သာယာတွင် လေဘာကတ် အတု ပြုလုပ်ရောင်းချသူ ၁၆ ဦးကို အမှုဖွင့်ထား